Ukushaywa wumoya - I-Airbnb
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Joannie
U-Joannie Ungumbungazi ovelele
Kutholakala ezintabeni ezinhle ze-Cascade "Suka". Ikhabhinethi isedolobheni elincane laseProspect. Imizuzu engama-40 nje. ukuya e-Crater Lake ikhabethe liphelele nokushisa/Umoya Emaphakathi. Isitofu sokhuni egumbini lokuhlala (kuhlinzekwe ibhanisi elingu-1). Ikhabethe elingu-900 sq. ft. linamakamelo okulala angu-2 anemibhede ye-Brand New Queen. Ikhishi ligcwele ngokuphelele, Imishini emisha yosayizi ogcwele. IKhabhinethi ihlezi ngemuva komgwaqo enegceke elikhulu elingaphambili futhi inendawo ye-Horseshoe Pit & BBQ ene-Picnic Table. Kuhle kubantwana. I-Circular Driveway kulula ukungena nokuphuma.
Indawo yokuhlala ene-Wi-Fi, isidlali se-Smart Blue Ray esinama-DVD ahlukahlukene ongawasebenzisa. I-Netflix, i-Youtube neziteshi zamahhala ezahlukahlukene. Ukuqashwa kwekhabhini ngabantu abangu-4. Igumbi lokuwasha elinewasha / isomisi uma kudingeka. Indawo yokudlela ehlukene enetafula elikhulu. Ikhululekile Kakhulu, iyamema futhi Ihlanzekile. Ukusetshenziswa ngokugcwele kwempahla. Jabulela indawo yangaphandle nomndeni noma abangani.
I-Prospect inezindawo zokudlela ezimbalwa edolobheni ( Prospect Café, Prospect Hotel Dinner House, The Gorge and Prospect Pizza. 20 Min up Hwy 62 is Beckies Café in Union Creek noma 30 min down hwy 62 to Shady Cove has Mac's Diner , Phils frosties , Miguels Mexican futhi kukhona Market edolobheni.
Sihlala ngaphansi kwemizuzu emi-5. kusuka ekhabetheni futhi bayakwazi ukuhlangana nawe uma unezidingo noma imibuzo singatholakala ngomakhalekhukhwini, umbhalo kanye nefoni yasekhaya. Izinombolo ziseshidini lemininingwane yekhabethe ekhabetheni. Kuze kube manje sikwazile ukuphendula lingakapheli ihora ngokusobala uma siphumile futhi akukho zimpawu ezingashintsha. Sizibophezele ekuhlinzekeni ngokuhlala okunethezekile, okukhumbulekayo ezimfuno zethu futhi sifuna ube nesikhathi esimnandi lapha e-Prospect Ekhabetheni elithi "Phuma".
Sihlala ngaphansi kwemizuzu emi-5. kusuka ekhabetheni futhi bayakwazi ukuhlangana nawe uma unezidingo noma imibuzo singatholakala ngomakhalekhukhwini, umbhalo kanye nefoni yasekhay…
UJoannie Ungumbungazi ovelele